निदान अस्पतालका सिइओ र डाक्टरसहित ५ जना फक्राउ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । ललितपुरको निदान अस्पतालका सिइओ, डाक्टरसहित पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई मिर्गाैला किनबेच तथा विक्री वितरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ २६ घर भएका निदानका सिइओ विपेन्द्र प्रधान, डा. राजेश पन्त, रामेछाप दोरम्बा ३ घर भई स्वयम्भू बस्ने शंकरलाल लामा, सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका ९ घर भई भक्तपुर मध्यपुरठिमी बस्ने कुमुदकुमार भट्टराई र ललितपुरका रामचन्द्र आले छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत बुधबार ब्युरोले घटनाबारे जानकारी गराएको हो । उनीहरूको मिलेमतोमा एक बिरामीको शंकरलाल लामालाई मिर्गाैला विक्री गरिएको प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ब्युरोले जनाएको छ । ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाका अनुसार नक्कली व्यक्ति खडा गरी मिर्गाैला लामालाई प्रत्यारोपण गराइएको थियो । थपलियाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि एकको अनुमति दिएकोमा आलेले अर्कै व्यक्ति खडा गराउने कागज तयार पारेका थिए ।
तीन महिनाअघि भएको सो घटनाबारे सूचना पाएपछि एक महिनायता प्रहरी अनुसन्धानमा जुटेको थियो । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेकाले मिर्गौला कसको झिकिएको हो ? भन्नेबारे प्रहरीले खुलाएको छैन । मिर्गौला दिने व्यक्ति र लिने व्यक्ति आफन्त हुनुपर्छ र स्वीकृतिको कागजात तयार भएपछि मात्र मिर्गौला प्रत्यारोपणको प्रक्रिया अघि बढ्छ । आलेले नक्कली आफन्त खडा गरेर कागजात तयार पारेको प्रहरीको जिकिर छ ।
विशेष चाडबाड सुरक्षा कार्यक्रम सुरु
असोज १ ।काठमाडौ,महानगरीय प्रहरीले उपत्यकामा आजदेखि उपत्यकामा चाडबाड बिशेष सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ […]
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आज सोमबार रातिदेखि लागु हुने गरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । […]
बैतडीमा चट्याङमा परी एक जनाको मृत्‍यु
वैशाख ३ ।भीमदत्तनगर,बैतडीको कुवाकोट गाविसमा परेको चट्याङमा परी एक शिक्षकको मृत्यु भएको छ । बुधबार साँझ […]
सर्वोच्चद्वारा प्रचण्डसँग तीन दिनभित्र जवाफ माग
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अदालतको अपहेलनासम्बन्धी […]
नेपालमा पुनः भूकम्प
काठमाडौं ।शनिबार बजाङमा भूकम्पको धक्का महशुस गरिएको छ। शनिबार मध्यान्ह १२ बजेर २६ मिनेट जाँदा बझाङमा ४ दशमलव […]